လူတွေနဲ့ ပြန်လည်စည်ကားနေတဲ့ ဝူဟန်မြို့ကြီး (ပါတီပွဲတွေပါ ပြန်လုပ်နေပါပြီ) - Zet Star
လူတွေနဲ့ ပြန်လည်စည်ကားနေတဲ့ ဝူဟန်မြို့ကြီး (ပါတီပွဲတွေပါ ပြန်လုပ်နေပါပြီ)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ခဲ့ရာ ဗဟိုချက်ဟု ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ယူဆထားကြသော တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှာ ယခုအခါပြန်လည်စည်ကားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်းမှစပြီး လော့ဒေါင်းများကို တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေလျှော့ပေးခဲ့ရာ ဝူဟန်မြို့တွင် ပြည်တွင်းဘောလုံးကလပ်ပြိုင်ပွဲများပြန်လည်ကျင်းပခြင်း၊ pool party များပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ယခုအခါ ဝူဟန်မြို့မှာ လမ်းသွားလမ်းလာတို့ဖြင့် ပြန်လည်စည်ကားလာ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ကျန်ရှိနေသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒဏ်ကို ခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ လူပေါင်း ၉၉၃၄၃၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၂.၈ သန်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်မှုဒဏ် အခံရဆုံးနိုင်ငံများမှာ အမေရိက ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ၂ သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေကို သတိမပြုလျှင် သေဆုံးသူ ၂ သန်းအထိရှိလာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က သတိပေးထားပြီး အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်၊ ရုရှား အပါအဝင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေးရရှိရန် အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
← မနက်ဖြန် YBS စီးပြီး နယ်ကျော်ရင် အရေးယူခံရမှာလား? YBS ကို ဘယ်လိုလူတွေပဲ စီးလို့ရမလဲ?
ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာ ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦး →